Zvinokwanisika here kutora backlink yakanaka kubva kumapuraneti akawanda eR PR?
Paunenge uchigadzira mazano ewebsite yako, unofanirwa kubhadhara zvakananga kune zvitubu zvaunosarudza nekuda kweizvi. Nyaya huru ye webmasters uye vanyori vekuru ve SEO vanoti vane simba rakanyanya rerelinks rinoshandisa mutengo wemajisi anokosha anobva kumaWP websites akawanda, akadai seGoogle, YouTube, Wikipedia kana Facebook.
Tichazotanga nenyaya iyi nekufungidzira kuti iwe unotova nekambani yebhizimisi pane Facebook uye webhusaiti kana kuti peji peji yekutsvaga yekambani yako.
Saka, sezvinoratidzira zvinoratidza, zvinhu zvose zvaunoda kuti uite zvakawanda zvehutano zvakapoteredza nzvimbo yako ndeyekugadzira zvigadziriswa zvakagadziriswa uchishandisa mazwi ekutsvaga zvakakodzera uye kuvaka dofollow backlink kubva kumaW high PR - cheap dedicated servers $10.
High PR nzvimbo dzekutarisa zvakakosha
Iri basa rakaoma kuti uwane zvakakosha zvemashure kubva kumasimba ekuremekedza zvikuru kana iwe munguva ichangobva kutanga nzvimbo yako. Zvisinei, iwe haufaniri kurega kupera sezvo kune maitiro akawanda ezvakaipa anokonzera mazano ekugadzira mazano ayo achakubatsira kuti uende kune TOP yezvinjini kutsva munguva pfupi.
High PR backlink kubva kuYouTube
YouTube ndiyo inotamba nhau yepaGoogle. Nharaunda yechiremera chechiremera chebhuku rino rewebhu pane 10 kubva pa10. Iwe unogona kuwana zvakadzama shure backlinks kubva pano, kuisa vhidhiyo yako ipapo. Zvese zvaunoda ndezvokuumba mavhidhiyo akazara pamusoro pezvikomboti zvako kana kuti emhizha muhuwandu uye shandisa vidiyo iyi pawebhu. Mushure maizvozvi, unofanirwa kugadzira tsanangudzo yevhidhiyo inobatanidza, kusanganisira yako URL yepaiti mairi.
High PR backlinks kubva ku Wikipedia
Wiki nderimwe nyanzvi yakawanda inowanikwa paIndaneti yakagadzirwa nemubatsiro rwevadzidzi vanozvipira. Iyi webhupu inozivikanwa nemasimba ayo uye zvakakosha. Ndicho chikonzero chiine chinzvimbo chepamusoro paGoogle kuburikidza nemibvunzo yakasiyana-siyana yakagadziriswa Authority Authority ye Wikipedia zvakare 10 kubva pa10. Icho chinhu chakakwana chekuwedzera kuvimbika uye chiremera chemunzvimbo chero ipi zvayo ingave iri itsva kana kuti yakareba iripo. Pane nzira dzakawanda dzekutora PR yakakura shure kumashure kubva kune ichi chinokosha. Zvisinei, kana zvasvika pakuongorora kwebhuku, zvinhu zvinowedzera kuoma. Asati ashuma chero chinyorwa, vanhu chaivo vanoongorora uye vanobvuma. Ndicho chikonzero kumashure kwako kumashure angabviswa panguva yekugadziriswa kwebhuku.
Zvisinei, pane nzira dzakasiyana-siyana dzinobatsira dzichakubatsira kuti uwane simba remashure kubva ku Wikipedia pasinei nezvipingamupinyi:
Ita peji itsva pa Wiki, kana kusabudisa chinhu pairi. Kwemamwe nguva peji iyi ichave iri pakurongwa.
Zvadaro sarudza peji re Wiki pane mamwe mazita asina kunyanya kufarirwa uye isa pasi site yako yekunyorera uko. Hazvigoneki kuongorora mapeji ose, ndicho chikonzero Wikipedia inoshingaira isingateereri mibvunzo inodzidzisa isingazivikanwi.
Tsvaga yako inowanikwa munyaya yezvinyorwa.
Zvakakosha kutaura kuti Wikipedia backlinks haisi-kutevera mazano. Ndicho chikonzero chinobatanidza kubva kune ino chisingakuvigirei mutengesi. Zvisinei, kuti uwedzere kuvimbika uye chiremera chebasa rako rewebhu, zvinokurudzirwa kuti uwane backlink kubva munzvimbo dzakakwirira dzeP PR semusana pe Wikipedia.